म कहिले आफ्नै देश फर्कन पाउछु होला ? | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
म अहिले टर्कीको इस्तानबुलमा बस्छु । नेपालबाट आएको तीन वर्ष भयो । टर्की आएको म यो दोस्रो पटक हो। यसअघि पनि तीन वर्ष यहाँ बसेर नेपाल फर्किएको थिएँ । तीन वर्षमा काठमाडौँमा सानो जग्गा जोड्न सकेँ । माइतीको बुबासँग मिलेर घर पनि बनाएँ । घर बनाउँदाको ऋण तिर्न फेरि सकस भएपछि टर्की नै फर्किएँ । नयाँ साहुको घरमा बच्चा हेर्न र घरको काम गर्न बसेँ । तीन वर्ष पछि नेपाल फर्कने योजना बुन्दै थिएँ यो कोरोना भाइरसले सबै योजना चकनाचुर बनाइदियो ।
अप्रिलमा मेरो भिसा पनि सकिने थियो । २५ गते नेपाल फर्कने टिकट थियो । साहुले पनि बिदा गरिसकेका थिए । तर त्यहीँ बेला नेपालमा लकडाउन सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै ठप्प बनाएपछि मेरो नेपाल फर्कने चाहना अधुरै भयो ।
नेपाल फर्कन १५ दिन बाँकी थियो । घर जाने खुसी सम्हाली नसक्नु थियो । तर विश्वलाई लागेको कोरोना भाइरस मेरो खुसीमा पनि लाग्यो । म नेपाल फर्कन पाइन ।
म अहिले ३२ वर्षकी भए । मेरो जन्म घर सिन्धुपाल्चोक सुनकोसी गाउँपालिका कुहिले हो । नेपालमा हजारौँ हन्डर खाएपछि म विदेश आएकी हुँ । मेरो १० वर्षकी छोरी पनि छे । एस.एल.सी सक्ने बित्तिकै घरबाट विवाह गरिदिए जिल्ला कै राम्चे भन्ने ठाउँमा । नेपाली सेनामा कार्यरत श्रीमान् व्यवहारिक नभइदिँदा मैले धेरै दुःख सहेँ । उनले पनि सेनाको जागिर छोडेपछि घर व्यवहार चलाउन कमाई नगरी नहुने भयो । ४ वर्षकी छोरी माइतीमा छाडेर टर्की आएँ । सुरुका वर्ष भाषा संस्कृति नजान्दा र साहु गतिलो नपर्दा नसोचेको दुःख पाएँ । विदेशमा दुःख नपाउने को नै होला र ? त्यसमाथि घरेलु कामदारको दुःख बयान गरी साध्यै छैन ।
यो पटक चाहिँ राम्रै घरमा काम पाएँ । तीन वर्षमै ऋण चुक्ता गरेर केही जोहो पनि गरेको थिएँ । खैरेले पढाइदिने स्कुलमा छोरीलाई राखेको छु । आफ्नै बाबु आमा हुँदा पनि छोरीले अनाथ जसरी अरूको भरमा पढ्नु परेको छ । अब चाहिँ नेपालमै गएर केही उद्यम गरौँला, छोरीलाई काखैमा राखेर हुर्काउला । आमा भन्न बिर्सिएकी छोरीलाई मन भरिको ममता दिएर ‘म नै तिम्री आमा हुँ’ भनेर चिनाउँला । श्रीमानसँग पनि सम्बन्ध सुधार गरेर घरबार अगाडि बढाउँला भन्ने सोचेकी थिएँ तर यो लकडाउन र कोरोना भन्ने भाइरसले सबै बिथोल्यो । के गर्‍यो के । अहिले त म नेपाल फर्केको सपना मात्र देख्छु बिपनामा टर्की कै एक कुनामा हुन्छु ।
अन्य देश जस्तो टर्किमा धेरै नेपाली छैनन् । दूतावास पनि छैन । एजेन्ट मार्फत काम गर्नुपर्छ । अरू देशका नेपालीलाई त सरकारले स्वदेश लग्यो भन्छन् हामीलाई पहलसम्म पनि गरेन । आफै जान पनि नमिल्ने । यता पनि उस्तै छ हाल, लकडाउन र कोरोना भाइरस । म स्वदेश फर्कने भएपछि साहुनीले पनि आफ्नो बच्चा हेर्न अर्को मान्छे खोजेकी थिइन् । अब म नै जना नपाएपछि केही दिन त खान लाउन दिइन् सधैँ काम नगरी विदेशको ठाउँमा कसले पो पाल्छ र ? तर धन्न अर्को काम गर्ने सँग बच्चा रत्तिएन । त्यसैले मलाई नै फेरि काम गर्न दिइन् र बस्न खान सजिलो भएको छ । नत्र यो बिरानो देशमा म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । एक वर्षको भिसा थप्न साहु साहुनीले नै पहल गरिदिएर मलाई सजिलो भयो । अब अर्को अप्रिलसम्म त म नि नेपाल आइपुग्छु होला ।
दिनहुँ समाचारमा नेपालबारे उपडेट भइराख्छु । नेपालमा कोरोना बढेको देख्दा अत्यास लाग्छ । टर्की त धनी देश हो, स्वास्थ्य उपचार पनि राम्रो छ । कोरोना लागे पनि बेलैमा उपचार र स्याहार हुन्छ, निको हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ तर नेपालमा गाह्रो छ । सरकारको पारा झन् त्यस्तो छ । जनतामा त्रास छ । दिनदिनै कोरोना बढेको बढ्यै छ तर सरकारले अझै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यतिका महिना भइसक्यो । नियन्त्रणको त परकै कुरा सान्त्वना दिन पनि जान्या छैन । नेपालमा त उपचार पनि महँगो हुन्छ । त्यसमाथि मान्छेहरूले डाक्टरलाई नै छि छि दूर दूर गरे भन्ने सुन्छु । त्यस्तो भयो भने त कसरी कोरोना नियन्त्रण हुन्छ त ? कसरी कोरोनासँगको लडाइँमा मान्छेहरूमा हिम्मत आउँछ ।
छोरीको साह्रै याद आउँछ । यता अरूको बच्चा हेर्नु परेको छ उता आफ्नो बच्चाको हाल के होला त्यो पनि यस्तो बेला । हुन त हजुरबा हजुरआमासँग बसेकी छे तर उहाँहरू पनि काम गर्न जानुपर्छ कता कता हिँड्नु पर्छ । त्यतैबाट कोरोना नै आउँछ कि भन्ने डर लागिरहन्छ ।
यहाँ साहु साहुनी दुवै दिनहुँ काममा जान्छन् । कति बेला कोरोना भाइरस ल्याएर सार्छन् कि जस्तो लाग्छ । अत्यास लागिसक्यो । जे जसरी भए पनि नेपाल फर्कन पाए आफ्नै छोरी परिवारसँग बस्न पाउँथे । ढुक्क हुन्थ्यो । अब त नेपाल सरकारले लैजाने छाँटकाँट छैन । मैले त आस गर्न पनि छोडिसकेँ । कहिले कोरोना सकिन्छ ? दुवै देशमा (टर्की र नेपाल) लकडाउन खुल्छ र आफ्नै देश नेपाल फर्कन पाउँछु भन्ने सपना बुनेर बस्नु परेको छ । यो गाह्रो अवस्थामा आफूले आफैलाई हिम्मत दिनु बाहेक अरू के नै गर्न सकिँदो रहेछ र हामी निरीह बिदेसिएका नागरिकले ।
यो कथा अम्बिका भण्डारीसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर हाम्रो साथी रुपा खड्काले लेख्नु भएको हो ।
काम थाल्ने बेला कोरोना !
१३ असार २०७७, शनिबार १०:०१